बच्चाका लागि परदेशीका अभिभावकले खेल्नुपर्ने भूमिका | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
बच्चाका लागि परदेशीका अभिभावकले खेल्नुपर्ने भूमिका
असार २५, २०७५ सोमबार १३:७:३९ | रामकुमार थापा
रामकुमार थापा ।
हरेक आमाबुवाले आफ्नो सन्तान देशको ठूलो मानिस बनेको हेर्न चाहन्छन् । आफ्ना छोराछोरीको बारेमा अरुले राम्रो भनेको सुन्न चाहन्छन् । अभिभावकको बुझाइ ठूलो मान्छे भनेको पाइलट, डाक्टर, नर्स, वकिल बन्नु पर्छ भन्ने हो ।
छोराछोरीलाई आफूले चाहेको जस्तो बनाउन बालबालिकालाई सानैदेखि आफ्नो अधिनमा राख्न खोज्छौं । आमा वा बाबु विदेश गएका परिवारका बच्चालाई त झन बढी दवाबमा राख्ने गरिन्छ ।
परिवारको सदस्यले बच्चालाई अधिनमा नराखे पछि गएर बिग्रिन्छ र भनेको मान्दैन भनेर जसले पनि हप्काउने, पिट्ने र शारीरिक तथा मानसिक यातना दिइरहेका हुन्छौं । अभिभावकहरु आफ्नो बच्चालाई सजाय नदिए त छोराछोरी बिग्रिहाल्छन कि भन्ने सोच राख्छौं ।
हाम्रो समाजमा एउटा भनाई नै छ, बाबुआमाले तह नलगाएको बच्चालाई समाजका अन्य व्यक्तिले तह लगाउँछन् । अर्थात आफ्नो आमाबाबुले नपिटेको बच्चालाई छिमेकका मानिसले तह लगाउँछन् ।
त्यसैले आफ्नो बच्चाहरुलाई आफैले पिटेको राम्रो । अरुले पिट्दा आफूलाई सहन गाह्रो भएकोले आफैंले पिट्नुपर्छ भन्ने सोच अहिले पनि छ । बच्चाले आफ्नो आमाबाबुले भनेको कुरा मान्दियोस भनेको जति खाइदियोस, विद्यालयबाट घर फर्किएपछि किताब लिएर पढिरहोस, झगडा नगरोस, मिठो बोल्दियोस अर्थात अझै भनौ बच्चाले आमाबाबुले उठ भने उठ र बस भने बस भने मात्रै असल र ज्ञानी भएको सोच्छौं ।
यी कुरा नमानेको खण्डमा बालबालिकालाई पिट्ने, गाली गर्ने, थर्काउने र डर देखाउने गर्छौं । के यसो गर्दा तपाईंका बच्चाले मानेका छन त, एक पटक सोच्नुहोस् त । बच्चालाई ज्ञानी र असल बनाउने नाममा गरिएको तपाईं हाम्रो गतिविधिले बालमष्तिष्कमा कस्तो असर परिरहेको छ तपाईं हामीले कहिले सोचेका छौं ?
हुन त आफ्ना बालबालिकालाई पिट्ने वा सजाय दिने कुनै पनि आमा बुवाको मन हुँदैन ।
मन नहुँदा नहुँदै पनि पिट्ने वा सजाय दिन उक्साउने हाम्रो भित्री सोचलाई कसरी बदल्ने ? बाल्यकालमा भोगेका वा देखेका कुराहरुले मानिसको जीवनलाई प्रभावित पारिरहेको छ । बच्चा कस्तो संस्कार र परिवारमा हुर्केको हो, जस्तो संस्कार र परिवारमा हुर्केको हो उसले गर्ने व्यावहारनै उस्तै हुन्छ । बाल्यकालमा माया पाएको बालबालिकाले माया नै बाँड्न जान्दछन भने दुव्यर्वहार अर्थात झगडा भइरहने परिवारमा हुर्केको बच्चा पछि गएर यस्तै व्यवहार देखाउने हुन्छन् ।
बालबालिकाहरुलाई पिटेर न त अनुशासित बनाउन सकिन्छ न त आचरण सिकाउन सकिन्छ । पिटाइको साटो यस्ता उपाय गरेर बालबालिकालाई असल व्यवहार बनाउन सकिन्छ ।
१. बालकालिकालाई समय दिनुहोस्
बालबालिकासँग जति नजिक भयो उति नै उनीहरुको भावना बुझ्न सजिलो हुन्छ । उनीहरुको प्रत्येक गतिविधि हेर्न सकिन्छ । बालबालिकाको विचार, अभिव्यक्ति आमाबुवाले ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्छ ।
बालबालिकाले के भनिरहेका छन्, के कुराको अभाव भएको छ, उसका साथीहरुले कस्तो व्यावहार गरेका छन्, विद्यालयमा शिक्षकहरुले कस्तो सोचिरहेका छन्,अउनीहरुलाई कस्तो चिज खान मन लागेको छ र उनीहरुलाई कहाँ जान मन लागेको छ सबै थाहा पाउन सकिन्छ ।
बालबालिकालाई आमाबाबुबाहेक संसारमा अरु कोही पनि ठूलो लाग्दैन । अप्ठेरो पर्दा विश्वासिलो र संरक्षण गर्ने सक्ने भनेको नै आमाबाबु हुन भन्ने सोचेका हुन्छन् । त्यसैले आफ्ना नानिबाबुहरुसँग जति धेरै समय बिताउनुभयो त्यति नै उनीहरुको भावना बुझ्न सजिलो हुन्छ ।
दिनभरी अफिसमा काम गरेर बेलुका घरमा आउनुभएको छ भने पनि नानीबाबुसँग एकैछिन बसेर हालखबर सोध्ने बानीको विकास गर्नुहोस् ।
२. बालकालिकासँग साथी बन्नुहोस वा खेल्नुहोस्
आफ्ना नानीबाबुलाई साथीको रुपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । जबसम्म बच्चा बच्चै हुन्छन भनेर सोचिन्छ वा व्यवहार गरिन्छ । त्यसले हामी आफैंलाई समस्या बनाउँछ ।
उनीहरुसँग कुरा गर्नुपर्छ ताकि तिनले पनि धेरै कुरा थाहा पाउन सकुन् । उसका व्यक्तिगत कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । तिमीलाई अप्ठेरो परेको बेलामा सहयोग गर्ने म छु नि भन्ने कुराहरु बेलाबेलामा भनिरहनुपर्छ ।
नानिबाबुले भनेका कति कुराहरु सही हुन पनि सक्छन् । उनीहरुका कुरालाई पनि मान्नुपर्छ । समय मिलाएर उनीहरुसँग खेलिदिने, चित्र कोर्ने, बगैंचातिर घुम्न जाने, गीत गाउने वा सुन्ने, दन्त्य कथाहरु सुनाउने गर्नुपर्छ ।
तपाईंलाई भित्रैदेखि मन पराएको वा विश्वास गरेको छ भने बालबालिकाले कहिल्यै नराम्रो काम गर्दैनन् । तपाईंको बोली नाघ्दैनन् । किनकि बालबालिकालाई तपाईँसग भएको सम्बन्ध विग्रने डर हुन्छ उनीहरुलाई ।
३. बालबालिकालाई सजाय वा गाली गर्ने नगर्नुहोस्
आफ्ना बालबालिकालाई पिटेर वा सजाय दिएर अधिनमा राख्छु भन्ने सोच राख्नुभएको छ भने त्यो सोच आजैबाट हटाउनु पर्छ । पिट्नु वा पिटाई खानु भनेको समस्याको समाधान होइन । यसले त बालबालिकालाई झन आक्रामण गर्ने अनि घमण्डी हुन सिकाउँछ ।
बालबालिकालाई पिट्दा एकछिन माने जस्तो गरेपनि यसले पछिसम्म असर पु¥याउँछ । तपार्इंले दिएको सजाएका कारण बालबालिका तपाईंले सोचेका भन्दा ठिक उल्टो अर्थात नराम्रो बाटोतिर लागे भने वा उनीहरुले रिस पोख्न अन्य विकल्पहरु खोजे भने त्यसले तपाईंलाई नै समस्या पर्छ ।
बालबालिकालाई दिइने शारीरिक तथा मानसिक दुवै सजायले उनीहरुको शरीर र मन दुवैमा पीडा दिन्छ । यसो गर्दा उनीहरु अपमानित, असुरक्षित भएको, माया गर्ने कोहि पनि छैनन भन्ने सोच्छन् । त्यसैले अभिभावकहरुले सजाय दिने भन्दा पनि त्यसका विकल्प खोज्नुपर्छ । बालबालिकालाई अहिले हामीले जस्तो व्यवहार गरेका छौं पछि उनीहरुले गर्ने व्यवहार पनि उस्तै हुन्छ ।
४. आफ्ना बालबालिकाको प्रशंसा गर्नुहोस्
प्रशंसा भनेको यस्तो चिज हो जसले व्यक्तिको कार्यक्षमता बढाउँछ वा एक किसिमको शक्ति नै पैदा गर्छ । प्रशंसाले व्यक्तिको आत्मविश्वास बढाउँछ । आफ्ना बालबच्चाले गरेका सानो सानो कामलाई पनि धन्यवाद दिने वा प्रशंसा गर्नुपर्छ । ताकि उनीहरुलाई राम्रो काम गर्ने उत्प्रेरणा मिल्छ ।
बालबच्चाले गरेको राम्रो कामको विषयमा पनि अरुको अगाडि कुरा गर्नुहोस् । उनीहरुले पनि आफ्ना राम्रा कुराहरुको बारेमा अरुको अगाडि भनेको सुन्न चाहन्छन् । जसले गर्दा बच्चाले राम्रो बानी र कामलाई अनुसरण गर्छन् ।
समय समयमा बालबच्चाले राम्रो काम गरेवापत पुरस्कार दिने गर्नुहोस । पुरस्कृत गर्दा कुन काममा के गरे बापत दिएको हो भनेर स्पष्ट पार्नुपर्छ । साना साना बालबालिकाले गरेका उपलब्धिमा पनि खुसि हुने, पुरस्कार दिने र प्रशंसा गर्ने गर्नुपछ । यसो गदा बालबालिका खुशी हुन्छन् ।
५. बालबालिकासँग बढी अपेक्षा नराख्नुहोस्
तपाईंका बालबालिकासँग बढी अपेक्षा नराख्नुहोस् । बढी अपेक्षा गर्नुभयो भने बच्चाले गरेको काममा तपाईं सन्तुष्ट हुन सक्नुहुन्न् । मेरो बच्चाले यति गर्न सकिहाल्छ नि, खाना आफैं खान सकिहाल्छ नि, अक्षर राम्रो बनाउन सकिहाल्छ नि, यति कुरा पनि यसलाई थाहा हुँदैन र भन्ने जस्तो कुरा नसोच्नुहोस् ।
गर्भमै जानेर वा बुझेर कोही पनि आएका हुँदैनन् । हामी हुर्केको समाज र परिवारमा भर पर्छ, बच्चा कस्तो परिवारमा र समाजमा हुर्केको हो भनेर । बच्चाहरुका अगाडि तपाईँ आफू नै नमुना व्यक्ति बनेर देखाउने कोशिस गर्नुहोस् ।
राम्रो काम गर्दा स्याबासी दिनुहोस्, अंकमाल गर्नुहोस, कुनै पनि काम गर्नु अगाडि यसरी गर्नुपर्छ, बिग्रियो भने त्यसको नतिजा यस्तो आउँछ भने सबै कुरा बताउनुहोस् । बच्चालाई यो काम गर्नु हुँदैन भन्नु भन्दा पनि यसरी गर्दा कस्तो हुन्छ भनेर उसको भावनालाई बुनुहोस् ।
६. तपाईँको बच्चालाई अरुसँग तुलना नगर्नुहोस्
आफ्नो बच्चालाई कहिल्यै पनि अरुसँग तुलना नगर्नुहोस् । कुनै काम बिगा¥यो भने वा पढेन भने गाउँकै फलानाको छोराछोरी जस्तो हुने भयो भनेर कहिल्यै पनि तुलना गर्नुहँुदैन । अनि फलानाका छोराछोरी ‘फष्ट’ भयो मेरो चाँहि किन नहुने भन्ने कुरा पनि गर्नु हुँदैन ।
किनकि स्याउको स्वाद स्याउमै हुन्छ, सुन्तलामा हुँदैन । प्रत्येक व्यक्ति कुनै न कुनै विषयमा जान्ने हुन्छन् । कोही पढ्नमा अगाडि हुन्छन्, कोही चित्र कोर्नेमा । कसैलाई गणित विषय आउँछ त कसैलाई अंग्रजी । यसको मतलब तपार्इँको बच्चा पनि कुनै एक कुरामा अगाडि छन् तर तपाईँले पहिचान गर्न सक्नुभएको छैन ।
हामीले जे रोपेका छौं त्यही फल्ने हो । आफ्नो बच्चालाई तेरो उमेरमा त म एक भारी घाँस काट्थें, खाना पकाउँथे, लुगा धुन्थें जस्ता कुरा गरेर बालबालिकालाई दबाव नदिनुहोस् । किनभने तपाईले सानो बेलामा गरेको काम तपाईको बच्चाले थाहा पाउन सक्दैनन् ।
७. बच्चा भएर सोचौं
स्वभावैले बालबालिका चकचके हुन्छन् । उनीहरु नयाँ कुरा सिक्न चाहन्छन् । नयाँ काम गर्न चाहन्छन् । आफुले भनेको काम गर्न चाहन्छन् । उनीहरुले गर्ने प्रत्येक काम नराम्रो देख्नु हुँदैन । किनकी उमेर अनुसार बालबालिकाहरुले गर्ने व्यावहारहरु फरक हुन्छन् ।
बालबालिकाले गर्ने व्यवहारलाई सहज रुपमा लियौं भने उनीहरुको बानी, व्यवहार अनि व्यक्तित्वलाई अवलोकन गर्न सक्यौं भने वा आफूलाई बच्चा भएर सोच्यौं भने तपार्इं हामीले बालबालिकालाई गर्ने व्यवहारमा फरकपन आउन सक्छ ।
बालबालिकाले यो कुरा ठिक वा बेठिक भनेर छुट्याउन सक्दैनन् । उनीहरुले जुन व्यवहार गरिरहेका छन् । त्यो कुरा उनीहरुको लागि ठिक लागेर गरेको पनि हुन सक्छ । तपाईं हामीले पनि बच्चा बेलामा गरेको कतिपय कुराहरु सम्झियौँ भने अहिले आएर त्यो बेलामा यस्तो गल्ति गर्नु हुँदैनथ्यो भन्ने लाग्छ ।
के हामीले त्यो बेलामा ठिक बेठिक छुट्याउन सकेका थियौँ त ? पक्कै पनि थिएनौं किनकि हामी पनि त्यो बेलामा बच्चा थियौं । बच्चा भएकै कारण हामीले गल्ती गर्ने छुटका रुपमा लिएका थियौं । तर आज आएर हामीले बच्चा बेलाको समय बिर्सियौं । बच्चा बेलामा हुने भावनात्मक कुराहरुलाई सम्झियौं भने आजकै दिनदेखि तपाईंको सोच फरक आउन सक्छ ।
धादिङमा मनोपरामर्शकर्ताको रुपमा काम गर्दा कत्ति अभिभावकहरु बच्चाको समस्या लिएर आउनुहुन्छ तर आमाबुवालाई नै समस्या भएको पाएको छु । आफ्नो तनावले गर्दा बच्चालाई समस्या भएको देख्ने अभिभावक धेरै छन् ।
बालबच्चाको उमेर र उनीहरुको क्षमता अनुसार कामको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । उनीहरुले गर्न सक्ने काम लगाउँदा उनीहरुमा नेतृत्व लिन सक्ने क्षमता बढ्छ । बच्चाहरुको व्यवहार देखेर तपाईं तनाव नलिनुहोस् ।
बच्चाको व्यवहारलाई एकै चोटी बदल्ने प्रयास पनि नगर्नुहोस् । किनकि व्यवहार एकै पटक परिवर्तन गर्न खोजेर हुने विषय होइन । तर प्रयास चाहिँ गर्नुहोस् । वैदेशिक रोजगारीका कारण बालबालिकाका कि बुवा विदेशमा छन कि त आमा । त्यसैले घरमा हुने उनीहरुका अभिभावकले त झनै ध्यान दिनुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगारीले हुने तनाव र व्यवस्थापन गर्ने तरिका
‘लगानी स्वीकृत हुन नपाउँदै नेपालमै गाडी उत्पादन भएकाे जसरी ...
काठमाण्डौ आइरहेको विमान दुर्घटना हुनबाट केही सेकेण्डले मात्र ...
भोजपुरकै ठूलो इष्टर्न हाईड्रोको शेयर सर्वसाधारणको लागि खुला
यमनमा हैजाबाट कम्तीमा १२ जनाको मृत्यु, हजारौँ संक्रमित
काठमाण्डौमा बर्ड फ्लू, नियन्त्रणको प्रयास
चेल्सीको निराशाजनक प्रदर्शन, एभर्टनसँग पराजित
लिभरपुलको जित, उक्लियो शीर्ष स्थानमा
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा कांग्रेसकाे ध्यानाकर्षण
१३ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिल बिक्री हुँदै
उदयपुरको तीन ठाउँमा आगलागी, २३ लाख बराबरको क्षति
कोरियन भाषा परीक्षाको शुल्क तिर्न बैंकमा लाइन बस्नु नपर्ने, ई सेवाबाट पनि तिर्न सकिने